Fizahantany: liana aty Madagasikara ny Indianina | NewsMada
Fizahantany: liana aty Madagasikara ny Indianina
Tafiditra ao anatin’ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) ny fikarohana tsena vaovao any amin’ny firenena sy ny kaontinanta toy ny any India, ny any Azia, ny any Eoropa Atsinanana ary ny aty Afrika (tsy ao anatiny i Afrika Atsimo). Miisa 22 ny mpandraharaha mpikarakara mpizahatany avy any India, tonga eto amintsika, hijery ifotony ny toerana fizahantany azo tsidihina sy ny karazana tolotra misy eto Madagasikara. Mizara vondrona dimy izy ireo, handeha ho any Toliara, ho any Antsiranana, ho any Toamasina, ho any Morondava ary ho any Taolagnaro.
Tanteraka ity fivahinian’ny mpandraharaha indianina ity taorian’ny fitetezam-paritra nataon’ny Ofisy nasionaly misahana ny fizahantany (ONTM) niaraka amin’ny mpandraharaha miisa 18 sy ny hotely miisa dimy avy aty Madagasikara tany India, ny taona 2019 teo, toy ny tany New Delhi, ny tany Mumbai, ny tany Bangalore ary ny tany Chennai.
Hisy delegasiona indianina andiany faharoa, miisa 15, ho avy koa aty Madagasikara sady hanatrika ny “Hetsika iraisam-pirenena mikasika ny fizahantany” – “ITM 2020”.
Araka ny antontanisa iraisam-pirenena, nahatratra 50 tapitrisa ny teratany indianina vinavinaina hivoaka any ivelany, amin’ity taona 2020 ity. Maherin’ny 100 000 ny mpizahatany indianina nitsidika an’i Maorisy, ny taona 2019, 120 000 tany Afrika Atsimo ary 89 000 ny tany Tanzania.